करोडाैँ भ्रष्टाचारमा कांग्रेस सांसद गगन थापाको जवाफ कहिले ? « Dainiki
करोडाैँ भ्रष्टाचारमा कांग्रेस सांसद गगन थापाको जवाफ कहिले ?
यति बेला कांग्रेस संसदमा अडियो कान्डको खुब मच्चि मच्चि बिरोध गरिरहेको छ । कांग्रेस यसरी भ्रष्टाचारको बिरोधमा खडा हुँदा बिछट्टै खुसी लागेको छ, तर अचम्म पनि लागेको छ । कांग्रेसका नेता जयप्रसाद गुप्ता, चिरिन्जीवी वाग्ले, खुम बहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बिजय गछ्छदारहरु भ्रष्टाचारमा मुछिदा कांग्रेस बैठक बसेर औपचारीक रुपमा बचाउमा निर्णय गर्छ । भातृसंगठनहरुलाइ सडकमा प्रतिबाद गर्न उतार्छ । जेलबाट छुटेका खुमबहादुरलाइ ११० किलोको माला उनेर स्वागत गर्न पुग्छ । बिरामी हुँदा राज्यकोषबाट ३५ लाख सहयोग दिन्छ । कांग्रेस बडो बिचित्रको छ; माछा देखे दुलो भित्र हात, सर्प देखे दुलो बाहिर हात ।
अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा ।
देशमा फट्याङग्रा मर्यो भनेपनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्ने माननिय गगन थापाको कुरो त झन बिचित्र छ । सधै पारदर्शिताको, भ्रष्टाचारको, सुशासनको कुरो उठाउने गगन थापाले सांसद हुँदै लगेको ६ करोडको अनुदानका बिषयमा देशैभरी कुरा उठ्यो । गोकुल बास्कोटाको अडियो कान्ड आएको १८ घन्टा नबित्दै मन्त्रीपदबाट नैतिकताका आधारमा राजिनामा गर्न लगाउने प्रम ओलीको राजीनामा माग्ने गगन थापाले जनतालाइ ६ करोडको खसीबाख्रा देखाउँनु पर्दैन? उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा वीर अस्पतालको लागी ६ अर्बमा खरीद गरिएको स्वास्थ्य उपकरणमा २ अर्ब घोटाला भएको भन्ने छ ।
महालेखा परिक्षकले समेत बेरुजु देखाएको छ; जवाफ दिनु पर्दैन माननीय गगन थापा? बिपी कोइराला बिज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा १० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्ने बिषय जताततै छरपष्ट आयो । कुलपति आफै पनि भ्रष्टाचारमा जाकिएका छन, माननीय गगन थापाले जवाफ दिने हिम्मत गर्नु पर्दैन ? आफ्ना नेता भ्रष्टाचारमा परे हाम्रा नेता फसाइयो भनेर बिरोधमा संसद चल्न नदिने, अरु नेतामा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो भने कारबाहिको प्रकृया अघि बढाउँदा पनि प्रश्न गर्ने, संसद अवरोध गर्ने ।
आफ्ना नेता जेल परे सडकमा ढुङगा हान्न आउने, जेलबाट छुटे ११० किलोको माला बोकेर जेलको गेटमा पुग्ने माननीय गगन थापा ! नेकपा यस्ता दुइ मापदन्ड बोकेर हिड्दैन । भ्रष्टाचारमा निर्मम प्रस्तुत हुन्छ; राटो नबिराइकन । कांग्रेसलाइ पनि भ्रष्टाचार प्रतिरोधमा निरिपेक्ष बनाउँनुस । आफ्नो अनुहारमा पोतिएको कालोलाइ सेतो देख्ने, अरुका अनुहारमा दाग देखे सिंगो जीउ कालो देखें भन्ने चेतले भ्रष्टाचार निर्मुल हुँदैन । लेखकः अनेरास्ववियूका संयोजक हुन ।
प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०९:३२